မနညေ့က အိုးထရကျဖိုဒျ့ကှငျးမှာ ကငျြးပသှားခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ အစေီမီလနျအသငျးတို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂျ (၁၆)သငျးအဆငျ့ ရှုံးထှကျပထမအကြော့ပှဲစဉျမှာ အိမျရှငျယူနိုကျတကျအသငျးက လူငယျကစားသမားလေး အာမကျဒီယာလိုရဲ့သှငျးဂိုးနဲ့ သရရေလဒျထှကျပျေါအောငျ ကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အာမကျဟာ မီလနျနဲ့ပှဲစဉျမှာ အရနျစာရငျးမှာသာ ပါဝငျခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဒုတိယပိုငျးပွနျလညျစတငျခြိနျမှာလူစားဝငျ ကစားခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ (၅)မိနဈအကွာမှာပဲ အာမကျဟာ ဘရူနိုရဲ့ ဖနျတီးမှုကို နောကျပွနျခေါငျးတိုကျပွီး အသငျးအတှကျ ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဂိုးဟာ အာမကျအတှကျ ယူနိုကျတကျကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးသောသှငျးဂိုးဖွဈခဲ့သလို ဒီဂိုးကွောငျ့ စံခြိနျမှတျတမျးတဈခုကိုလညျး ရရှိသှားခဲ့ပါတယျ။ အာမကျအနနေဲ့ ယူနိုကျတကျအတှကျ ဥရောပပွိုငျပှဲတှမှော ဂိုးသှငျးနိုငျတဲ့ အသကျအငယျဆုံး အင်ျဂလနျပွငျပကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
တောငျပံတိုကျစဈကစားသမား ဒီယာလိုက ယူနိုကျတကျ အတှကျ ဥရောပပွိုငျပှဲတှငျ အသကျငယျဆုံးဂိုးသှငျးပေး နိုငျခဲ့တဲ့ (4)ဦးမွောကျကစားသမားဖွဈလာပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ကစားသမားတှထေဲမှာ အင်ျဂလနျလူငယျတိုကျစဈမှူး မဆေနျဂရငျးဝုဒျက ဥရောပပွိုငျပှဲတှအေတှငျး အသငျးရဲ့ အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးယူထားသူအဖွဈ စံခြိနျတငျထားနိုငျပါတယျ။
အသကျအရှယျနဲ့ မှတျတမျးကို ဖျောပွရမယျဆိုရငျ 1. ဂရငျးဝုဒျ (17)နှဈ (353)ရကျ ၊ 2.ရပျရျှဖို့ဒျ (18)နှဈ(117)ရကျ၊ 3.ဂြောဘတျ (18)နှဈ (158)ရကျ၊
4.ဒီယာလို (18)နှဈ (243)ရကျတို့ ဖွဈပါတယျ။ အစေီမီလနျ နဲ့ ပှဲစဉျမှာ ဒီယာလိုရဲ့ စှမျးဆောငျခကျြတှကေတော့ ဘောလုံးလုယူရာ၌အောငျမွငျမှု%-(100%)၊ ဘောလုံးထိခကျြ -(28)ကွိမျ၊ ဂိုးပေါကျခွိမျးခွောကျမှု-(1)ကွိမျ၊ သှငျးဂိုး-(1)ဂိုး ဖွဈပါတယျ။
မနေ့ညက အိုးထရက်ဖိုဒ့်ကွင်းမှာ ကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ အေစီမီလန်အသင်းတို့ရဲ့ ယူရိုပါလိဂ် (၁၆)သင်းအဆင့် ရှုံးထွက်ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာ အိမ်ရှင်ယူနိုက်တက်အသင်းက လူငယ်ကစားသမားလေး အာမက်ဒီယာလိုရဲ့သွင်းဂိုးနဲ့ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်အောင် ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အာမက်ဟာ မီလန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာ အရန်စာရင်းမှာသာ ပါဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်စတင်ချိန်မှာလူစားဝင် ကစားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် (၅)မိနစ်အကြာမှာပဲ အာမက်ဟာ ဘရူနိုရဲ့ ဖန်တီးမှုကို နောက်ပြန်ခေါင်းတိုက်ပြီး အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဂိုးဟာ အာမက်အတွက် ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝ ပထမဆုံးသောသွင်းဂိုးဖြစ်ခဲ့သလို ဒီဂိုးကြောင့် စံချိန်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်း ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အာမက်အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်အတွက် ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး အင်္ဂလန်ပြင်ပကစားသမားတစ်​ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား ဒီယာလိုက ယူနိုက်တက် အတွက် ဥရောပပြိုင်ပွဲတွင် အသက်ငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းပေး နိုင်ခဲ့တဲ့ (4)ဦးမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ အင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်မှူး မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်က ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေအတွင်း အသင်းရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းယူထားသူအဖြစ် စံချိန်တင်ထားနိုင်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်နဲ့ မှတ်တမ်းကို ​ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် 1. ဂရင်းဝုဒ် (17)နှစ် (353)ရက် ၊ 2.ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် (18)နှစ်(117)ရက်၊ 3.ဂျောဘတ် (18)နှစ် (158)ရက်၊
4.ဒီယာလို (18)နှစ် (243)ရက်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အေစီမီလန် နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ဒီယာလိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်​တွေက​တော့ ဘောလုံးလုယူရာ၌အောင်မြင်မှု%-(100%)၊ ဘောလုံးထိချက် -(28)ကြိမ်၊ ဂိုးပေါက်ခြိမ်းခြောက်မှု-(1)ကြိမ်၊ သွင်းဂိုး-(1)ဂိုး ဖြစ်ပါတယ်။